मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ टेन्डर | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी शुरु भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले नयाँ ठेक्का लगाउन तयारी थालेको जनाएको छ ।
समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले नयाँ ठेक्का लगाउन लगत विवरण, कागजात लगायतका तयारी थालेको बताउनुभयो । ‘बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ ठेक्काको तयारी भईरहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो–‘हप्तादिन भित्र ठेक्का लगाउने तयारी गरेका छौं ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भुइँ ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेट निर्माण, हेड वक्र्स र फिनिसिङ सहितका ७ वटा काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको बाँकी काम सक्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
निर्माणस्थल छोडेर इटालिएन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी भागेपछि मेलम्चीको काम २ महिनादेखि ठप्प अवस्थामा छ । कार्यक्षेत्र छोडेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेनालाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि समितिले ठेक्का तोडेको घोषणा गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रुपमा उक्त कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै निर्माणको काम छोडेर कम्पनी भागेको थियो ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ ठेक्का आह्वान गरे काम गर्न नदिने भन्दै केही ब्यक्ति लागि परेका छन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पीडित संघर्ष समितिको नाममा केही दिन अघि मात्रै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो दाबी गरिएको छ ।
समितिले मेलम्चीमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीको भुक्तानीको विषय नटुगिए सम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । नेपाली व्यवसायीले मुख्य ठेकेदार सिएमसीसँग डेढ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउदै आएका छन ।
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको हरेक गलत क्रियाकलाप र गतिविधिको पत्रकारहरूले समाचार प्रकाशित गरेपछि आत्तिएका गृहमन्त्री रामबहादुर…
काठमाडौं । विभिन्न निकायमा हुँदा संस्थागत काम कार्बाहीमा सुधारका काम गरेका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल झूटो मुद्दा नलागेको भए…
पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण परियोजनाका लागि ४१ अर्ब लाग्ने
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका पेट्रोलियम तथा खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण…
पुनर्निर्माणमा भारतको सहुलियत ऋणबारे छलफल, कसरी कार्यानवयनमा लैजाने भन्ने निष्कर्ष आउने अपेक्षा !
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ७५ अर्ब सहुलियत ऋण दिने भारत सरकारको प्रतिबद्धताबारे…
नयाँ बर्षको पहिलो रात: मापासे गर्नेमाथी ठूलै घात, १७ हजार चालक मापसेविरुद्धको कारबाहीमा !
नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा नयाँ बर्ष लाग्ने रातमा १७ हजार जनाभन्दा बढीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी…